सन्दर्भ मधेस बलिदानी दिवस : ‘आन्दोलन गर्ने नेता मन्त्री भए। हामीलाई उनीहरूले के दियो ? बरु हाम्रो छोराले ज्यान दियो’ – Shirish News
‘आज म छु, भोलि भइनँ भने तपाईंको काम कसले गर्छ’, ७५ वर्षीया गीतादेवी कलवारनीका कानमा हर्दम यो आवाज ठोक्कि रहन्छ। मधेस आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका गीतादेवीका माइला छोरा सञ्जय चौधरीको भनाइ हो यो।
२५ भदौ २०७२ मा मधेस आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर ढलेका थिए सञ्जय। प्रदेश २ सरकारले हरेक माघ ५ गते बलिदानी दिवस मनाउँछ। यसै सन्दर्भमा सञ्जयकी आमा गीतादेवीसँग राजकरण महतोले उनकै निवास धनुषाको महेन्द्रनगरमा गरेको कुराकानी :
हजुरको उमेर कति भयो ?
खै ७०–७५ वर्ष होला।
पिल्सिम (वृद्ध भत्ता) खानुहुन्छ ?
तपाईंका कतिजना छोराछोरी छन् ?
चार भाइ छोरा थिए। एउटा छोरो आन्दोलनमा बित्यो। एउटी छोरी ममता चौधरी पनि छिन्। जेठो छोरो सन्तोष घरमै बस्छन्। माइलो छोरो सञ्जयलाई प्रहरीको गोलीले खायो। काइँलो छोरो मनोज र कान्छो छोरो राजु मसँगै छन्।
तपाईंको जग्गा छ ?
घर भएको ठाउँमा अलि कति घडेरी छ। गाउँमै २ कट्ठा ५ धुर अर्को एक टुक्रा जग्गा छ। छोरीलाई विवाह गर्दा ढेड कट्ठा दिएर छोरोजस्तो जग्गाको मालिक बनाएको छु।
तपाईंको छोरो कुन सालमा बित्यो ?
भदौ २५ २०७२ सालमा।
तपाईंको छोरो कसरी बित्यो ?
आन्दोलनमा जनकपुर गा’को। त्यहाँ के भयो, कस्तो भयो, हामीले थाहा पाएनौं। मरेकै दिन पत्ता लाग्यो– गोली लागेछ रे।
गोली लागेको कुरा तपाईंलाई कसले भन्यो ?
मान्छेका मुखबाट गाउँमा सुनेको। कसैकसैले भन्दै थियो– सञ्जयलाई गोली लाग्यो। यो सुनेर आफू त रुन थालें छोरालाई के भयो, कहाँ भयो भनेर। अब गाडीघोडा बन्द छ। आन्दोलन भइराखेको छ। जनकपुर जाऊँ, कसैले जान पनि दिँदैन। त्यस्तैमा त्यो रात बित्यो।
बितेको छोरोको मुख हेर्नु पाउनुभयो ?
छोरो बितेको चार दिनपछि लास आयो महेन्द्रनगर।
घरमा आयो ?
रोडमै आयो, घरमा आएन। रोडमै गएर सबैजनाले मुख हेर्‍यौं। रोएँ, कराएँ। यहाँबाट लास तुरुन्तै लग्यो। यहाँ एकछिन पनि बस्नु दिएन।
लासलाई कहाँ लग्यो ?
बाबा पेट्रोलपम्प (जनकपुरनजिकै) दाहसंस्कार गर्न लग्यो। मेरो छोरोसँगै आन्दोलनमा मरेका अरू दुईजनालाई पनि त्यहीं दाहसंस्कार भयो। कहाँको थियो ? अरू दुईजना पनि गोली लागेरै आन्दोलनमा मरेको थियो।
जब तपाईंको छोरो आन्दोलनमा जनकपुर गयो, त्यसअघि अन्तिम कुरो के भएको थियो ?
आरे बाबा (मरोलाई सम्झें) आजै दिउँसो (२४ भदौ २०७२ ) मा महेन्द्रनगरमा किसानको र्‍याली थियो। त्यसमा मेरो छोरोले भाषण गर्‍यो। भाषणपछि घरमा आएका सबै नेतालाई नास्ता चिया पनि खुवायो। सबैसँग मिलमाझ गर्‍यो। घरबाट मोटरसाइकलमा जनकपुर निस्कियो। २५ गते भदौको आन्दोलनमा पुलिसले मेरो छोरोलाई खायो। घरबाट गएको छोरो गएको गयै भयो। दुवारा (फेरि) घरमा जिउँदो आएन।
छोरोसँग तपाईंको अन्तिम कुरो के भएको थियो ?
चौरचन पवनीको दिन थियो। पूजाको समान किन्न बजार जान भनें। उसले नजाने भन्यो। ‘आज छु म, भोलि भएन भने तपाईंको काम कोले (कसले) गर्छ ?’, छोरोले भन्यो। यो सुनेर मलाई रुवाइ गयो। (छोराको यादमा उनी भावविह्वल हँुदै रुन थालिन्। एक छिनमा उनले मुख खोलिन्) कहिल्यै यस्तो नभनेको मान्छे अहिले किन यस्तो भन्यो ? त्यतिखेर मेरा आँखाबाट आँसु आएको थियो। त्यसपछि छोरो साइकलमा चढेर सखुवा बजार गयो। गम्छामा बाँधेर चारवटा कन्तरी किनेर ल्यायो। आधा किलो केराउ ल्यायो। त्यसपछि अर्को दिन आन्दोलनमा गएको छोरो मरेको खबर आयो।
केको आन्दोलनमा चलिरहेको थियो ?
अँ, अँ, आन्दोलनमा। पार्टीहरूको आन्दोलनमा।
आन्दोलनको माग के थियो ?
खोइ के माग थियो, त्यो त मलाई थाहा छैन। बूढापाका मान्छे त्यति हामी बुझ्दैंनौं। त्यतिखेरको सद्भावना पार्टी (राजेन्द्र महतो) को आन्दोलनमा गएको थियो। ‘तीर छाप’ झन्डाबाला पार्टीमा हाम्रो छोरो नेता थियो।
आज तपाईंको छोरो हजुरको साथमा छैन, तर तपाईंजस्तै छोरोको बलिदानीले त्यही सद्भावना (राजपा हुँदै जसपा) पार्टी प्रदेश २ सरकारमा छ, सरकारलाई के भन्नुहुन्छ ?
के भन्नु ? (अक न बक्क हुँदै उनी टोलाउन थालिन्।)
तपाईंको छोरो नेता भएको पार्टीका नेता अहिले घरमा आउँछन् कि आउँदैनन् ?
कोही पनि आउँदैन (रुँदै) अहिले। सञ्जय बितेका बेलामा एकपटक जति नेता छन्, सबै आएका थिए। अहिले कोही पनि आउँदैन।
तपाईंको छोरा लागेको पार्टीका नेता अहिले मन्त्री छन्, कालो सिसा भएको गाडीमा हिँड्छन्, प्रदेश २ सरकार भएको ठाउँ तपाईंले देख्नुभएको छ ?
हामी त ग’को छैन, देखेको पनि छैन। संघीय सरकारले छोरोलाई सहिद घोषण गरिदियो। १० लाख राहत दियो। ऋण थियो, तिरिसक्यो। अहिले जीवन कठिनाइमा चल्दै छ।
प्रदेश सरकारले केही सुविधा वा राहत दिएको छ ?
बन्दीमा (लकडाउन) दालचामल दियो। एउटा भैसी दियो। त्यो पनि पोसिया लगाइदिए अर्कालाई। साँझबिहान उनले घरमा दूध पठाइदिन्छ। अलिअलि सबै परिवार खान्छौं। यो कहीं राहत भयो ?
तपाईंको सरकारसँग के माग छ ?
सरकारसँग मैले मागेपछि दिन्छ र (आक्रोेशित हुँदै) ? नेताहरू (मधेसी मोर्चाका नेता) ले भन्थ्यो कि सबै सहिदलाई ५० लाख रुपैयाँ दिन्छु। खोइ ५० लाख ? के भयो ? जिन्दगीको सामुन्ने ५० लाख रुपैयाँ पनि के हो र ? त्यो पनि अहिलेसम्म दिएन।
नेताहरूको भाषण फुस्स भयो ?
आन्दोलन गर्ने नेता मन्त्री भए। हामीलाई उनीहरूले के दियो ? बरु हाम्रो छोराले ज्यान दियो। भनाइ मात्रै थियो उनीहरूको।
मन्त्री भएका नेताले के गर्दैछन् भन्ने केही थाहा छ तपाईंलाई ?
तिनीहरू (नेता, मन्त्री) पकेट भरिरहेका छन्। बजेट खाइरहेका छन्। जो मर्‍यो गयो, गयो। नेताहरूको के काम ? बजेट खायो, बस्यो। कुर्सी मजबुत गर्‍यो, बस्यो।
तपाईंका जस्तै छोराले अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा ज्यान गुमाए, तपाईंजस्ता आमाका काख रित्तिए है ?
पैसासँग मेरो या कसैको छोराको ज्यान सट्टाबाजी गर्न मिल्दैन।
देशमा अर्को आन्दोलन हुन्छ ?
मलाई आन्दोलनको नाम सुनेर डर लाग्छ। एउटा आन्दोलनमा मेरो छोरो त गइहाल्यो, गयो। अस्ति मात्रैै घरअगाडि नाराजुलुस (संसद् विघटनको विरोधमा) भयो। फेरि अब कसको छोरो जान्छ, के हुन्छ, केही ठेगान छैन। जहिलेदेखि मेरो छोरो सञ्जय बित्यो तहिलेदेखि मनमा हलचल मच्चिरहन्छ।
प्रदेश सरकारले सहिद परिवारका सदस्यलाई जागिर दिने भनेको थियो ?
तपाईंले सुन्नुभएको कुरा मैले पनि सुनेको छु। तर जागिर कहिले दिन्छ त्यो पनि थाहा भएन (प्रदेश २ सरकारले करारमा एकजना सदस्यलाई दिन लागेकोे जागिर परिवारजनले अस्वीकार गरेको छ। यस परिवारले करारमा होइन, स्थायी जागिर चाहियो, ५० लाख पनि नगद चाहियो भन्ने माग राखेका छन्)।
जनताका छोराछोरी आन्दोलनमा जान्छन्, गोली लागेर मर्छन्, नेताका छोरोछोरी आन्दोलनमा मरेको सुन्नुभएको छ ?
आन्दोलनमा नेताहरूले छोराछोरी कहाँ लान्छ र ? जनताका छोराछोरी लगेर आन्दोलनमा होम्ने र तिनीहरूकै नाममा मोजमस्ती गर्न पल्केकाले देशै बर्बाद बनाए। मनमा छलकपट भएकाहरूले गर्ने नै यस्तै हो।